Sharon Stone na ndị ọkachamara ndị ọzọ na mgbede ọrụ ebere nke Stephen Tyler
Ụnyaahụ, ndị obodo Hollywood nwere ụbọchị ọrụ siri ike. Mgbe ụfọdụ ndị nọ na New York na-ekiri otú e si kesaa ihe ngosi Grammy Award, ndị ọzọ ghọrọ ndị ọbịa nke mgbede ebere Stephen Tyler, nke o mere ndokwa na Los Angeles. Na ihe omume a, ọtụtụ ndị ama gbakọtara, gụnyere ndị inyom bụ Sharon Stone, Olivia Wilde na ọtụtụ ndị ọzọ.
Sharon Stone ghọrọ kpakpando nke mgbede
N'afọ 2015, Steven Tyler, bụ onye a ma ama, malitere ntọala ebere, nke aha ya bụ Janie's Fund. Ewubere nzukọ a iji nye aka nye ndị inyom na-ata ahụhụ ma na-agwọ ọrịa. Echiche nke ịmepụta ego a bịara na azụ na 80 nke narị afọ gara aga, mgbe ọ mụtara akụkọ ọjọọ banyere nwa agbọghọ Gina, bụ onye nna ya kpasuru iwe. Mgbe ahụ, ọdachi a gụnyere na abụ a na-akpọ Janie's Got a Gun, mana n'ezie enyeghị Stephen aka ruo afọ 35 ka e mesịrị.
Steven Tyler na obi Amy Preston
Kwa afọ na njedebe nke ọnwa Jenụwarị, Tyler na-ezukọta ndị enyi ya na ndị niile na-eche banyere ime ihe ike iji mee ndokwa, ma nyefe ego ego n'aka Janie's Fund. Sharon Stone bụ onye dị afọ 59 bịara ileta onye a ma ama a na-akpọ egwú n'afọ a, na-adọrọ mmasị onye ọ bụla n'ụzọ dị ịtụnanya. Na onye omee ahụ ị ga-ahụ nnukwu elekere ojii nke nwere ihe dị mma: mkpịsị aka dị elu, uwe na-adọrọ adọrọ na ọkpụkpụ ogologo ya na ikpere. Nye ya, Nkume kpebiri itinye ọkụ na-acha ọkụ, na-agbanye otu ncha nke ejiri ọla edo, ma tinye akwa ntị nchara n'ụdị yiri mgbaaka na iko na-acha anụnụ anụnụ.
Mgbe foto site na ihe nkiri ahụ pụtara n'elu Intanet, site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa, Steven Tyler na onye hụrụ ya n'anya bụ Amy Preston, Kelsey, nwa Tyler, Ashley Simpson na Evan Ross, Jason Sudeikis na Olivia Wilde, ndị agbụrụ ahụ bụ Sharon Stone . Ọ meriri onye ọ bụla na ya ọchị ọchị na ụzọ o anya. Nke a bụ ụfọdụ okwu nwere ike ịgụ na Intanet: "Ana m enwekarị mmasị na Nkume, ma n'oge na-adịbeghị anya ọ mara mma. Ọ dị mma ile anya na ndị inyom dị otú ahụ nwere obi ụtọ, n'ihi na mgbe ị ghọtara na afọ dị nanị ọnụ ọgụgụ "," Sharon na-amasị m. Ọmụmụ ọnụ ọchị anaghị ahapụ ya. Ozugbo otu onye nwere ike ịhụ otú obi dị ya ụtọ "," Sharon na-aghọwanye, otú ahụ ka ọ na-adọrọ mmasị karị. Ọ dị nnọọ afọ ndụ ya, n'ihi na ya na ya na-enweta ya n'onwe ya, pụrụ iche pụrụ iche ", wdg.
Stephen Tyler na nwa ya nwanyị bụ Chelsea
Ashley Simpson na Evan Ross
Jason Sudeikis na Olivia Wilde
Kpakpando iri na asaa ndi nwere obere ara, ma ha adighi-ama ya!
16 kpakpando nwere ike imeri oria ojoo
Nkume mere okwu na-agba aka
Mgbe e mechachara foto ahụ, a kpọrọ ndị ọbịa niile ka ha gaa n'ụlọ nzukọ ahụ, Sharon kpebiri na-ekwu okwu n'ihu ọha, na-emetụ aka na okwu banyere ime ihe ike. Nke ahụ bụ ihe omee ahụ kwuru:
"Nye m, nwoke ahụ bịara Hollywood si na Pennsylvania, okwu metụtara ime ihe ike n'ụzọ mmekọahụ bụ nnukwu. Na mgbe ahụ na Hollywood, ọ bụ ihe a na-emekarị ma ugbu a na-eme mkpesa banyere ndị m kwesịrị inye onwe m, agaghị m eme. N'otu oge, enwere m nhọrọ ime ihe ha na-ekwu, ma ọ bụ iji nweta ihe ma laghachi n'ụlọ. Achọrọ m ịghọ onye na-eme ihe nkiri, onye a ga-enye ọrụ na foto ndị mara mma, ya mere enwere m ihe mgbaru ọsọ m. Maka ihe niile dị na ndụ a, ị ga akwụ ụgwọ, ọbụna n'ụzọ dị egwu. Enwere m obi ụtọ na n'ime ọha mmadụ taa, isiokwu nke ime ihe ike na-adị nnọọ njọ, n'ihi na ọ bụghị ndị a na-enwe mgbe nile nwere ike ịnagide obi ha mgbe ha mechara ihe ọjọọ. Steve Tyler ji aka ya mee ihe a. Achọrọ m ikwere na ọ ga-aghọ ahịhịa nke ga enyere ọtụtụ ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị aka imeri otu ìgwè siri ike ná ndụ ha. "
Sharon Stone na-eme na mgbede gala
Evan Ross, Ashley Simpson, Amy Preston na Steven Tyler
Katie Holmes butere nwa ya nwanyị n'èzí
Onyeisi William kpochapụrụ isi ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọhụụ
Chloe Moretz na Brooklyn Beckham
Adriana Lima na nwunye ya bụ Marco Jarić na-anọrọ
Patrick Stewart na Ian McKellen
Keith Urban nyere ụlọ obibi $ 40 nde na Nicole Kidman
Cristiano Ronaldo a hụrụ n'anya Georgina Rodriguez chere na ọ dị ime
Rihanna na-ekele Queen Elizabeth II n'ụbọchị ọmụmụ ya
Jennifer Lawrence na peeji nke Vogue maka oge mbụ kwurịtara mmekọrịta ya na Darren Aronofsky
Amber Hurd na-emepụta onye na-emepụta ihe n'ihi ọnọdụ nke mmekọahụ
Ihe ndekọ banyere Prince
Foto mbụ nke nwa Amal na George Clooney
Lindsay Lohan kpara uwe na-enweghị obi
Kim Kardashian sere onyinyo ya na-ekwu banyere ihe nzuzo nzuzo ya
Wedding nke Prince William na Kate Middleton
Ụbọchị Flight Day
Umu nwanyi na-enwu ume maka oge okpomọkụ
"Atlas of Beauty": ụmụ nwanyị kachasị mma n'ụwa nile
Columbia akpụkpọ ụkwụ
Esi eteta n'ụtụtụ?
Esi ewepu ntachu?
Ebe a na-eme egwuregwu ski
White scurf na akpịrị
Onye na-ese ihe na-enyere onye ọkà mmụta akwara aka site n'ịkwado isi ndị isi ha
Kedu ka eji eji ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ 2013?
Royal Canean Urinari maka nwamba
Foto nke Onye Amụma: ndị amụma a ma ama kpughere ihe nzuzo nke Mezaịa ahụ
Ọnwụ nke nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ bụ ezigbo ọdachi nye Michel Dockery
Metro nke Barcelona
Ngwa gbatịa ákwà
Nkpuru osisi na-edozi ihe maka ubi - nke umu osisi di iche iche ka mma ka ohia na ulo gi?
Emega ụkwụ maka ballet
Pọllomaloma na-arahụ - nke a ga - esi egbochi kansa?
Olee otú ị ga-esi lụọ nwa nwanyị?